अमेजन यूकेको बिक्री बढाउने तरिकाहरू के हो?
अमेजन मालिकहरूले यो व्यवसायलाई अनलाइन बुकस्टोरको रूपमा सुरू गरे. यो वर्ष अमेजनले 20 औं बर्षको सबैभन्दा ठूलो इन्टरनेशनल रिटेलरको रूपमा मनाउँछ. यो धैर्य र कडा कामले सानो स्थानीय व्यवसायलाई सबैभन्दा प्रमुख विश्व व्यापार प्लेटफर्ममा कसरी बदल्न सक्छ भन्ने एक उज्ज्वल उदाहरण हो.
यो प्लेटफार्मको लोकप्रियता विक्रेतासँग उठाउँदै छ. सांख्यिकीय डेटा अनुसार, यस व्यापारिक प्लेटफार्ममा विश्वभरि हरेक मिनेट विश्वकप 88,000 डलर खर्च गरिन्छ. त्यसैले, विक्रेताहरूको लागि त्यहाँ आफ्नो व्यवसाय विकास गर्न र समग्र राजस्व बढाउनको लागि यो एक राम्रो अवसर हो.
तथापि, यो पहिले अमेजन मा बिक्री को बढावा गर्न को लागी यो सजिलो छैन. हरेक दिन हजारौँ नयाँ अनलाइन व्यापारीहरूले यस प्लेटफार्ममा आफ्नो भाग्यको प्रयास गर्छन् र पछि प्रतिस्पर्धा ज्यामितीय प्रगतिको साथ बढ्दै गएको छ. यही कारण यो प्लेटफर्ममा देखिने देखिन्छ; तपाईलाई केहि राम्रा तरिकाहरू थाहा पाउनु हुन्छ कि तपाईको अमेजन यूके बिक्री कसरी बढाउने र त्यसलाई अभ्यास गर्न सक्षम हुन सक्नुहुनेछ.
यो लेख यो डिजाइन गरिएको छ कि कसरी तपाईंको अमेजन व्यापार खाता सुधार गर्न को लागी यो तपाईंको विश्वकप ग्राहकहरु लाई दुनिया भर देखि देखिने देखिने को लागी बनाइयो।. त्यसोभए हामीलाई यी अमेजन अनुकूलन चुचको केहि छलफल गरौं.
अमेजन यूके मा तपाईंको बिक्री को बढाने को लागी व्यावहारिक प्रविधी
जैविक समीक्षाहरूको शक्ति कम गर्न सकिँदैन. तिनीहरूले तपाईंको व्यवसाय प्रमोशनको लागि आवश्यक छ किनकि प्रयोगकर्ताले तपाईंको उत्पादनका समीक्षाहरूको आधारमा आफ्नो खरीद निर्णय सिर्जना गर्दछ. सामान्यतया, खरीदार निर्णय एक उत्पादन वा सेवा खरीद गर्दा अघिल्लो मार्केट लेनदेनको सम्भावित ग्राहकहरूको निर्णय गर्ने प्रक्रिया हो।. राम्रो उत्पादन समीक्षा तपाईसँग छ, उच्च तपाई अमेजन खोज परिणाम पृष्ठमा स्थान हुनेछ. सांख्यिकीय डेटा अनुसार, 88% भन्दा बढी ग्राहकहरूले यसलाई खरीद गर्नु अघि प्रतिक्रियाको बारेमा प्रतिक्रियाहरूको जाँच गर्छन्.
एक सम्भावित अनलाइन व्यापारीको रूपमा, तपाईंलाई स्पष्ट भन्दा सोच्न आवश्यक छ र प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया उत्पन्न गर्ने उत्कृष्ट तरिकाहरू खोज्नु पर्दछ।. उदाहरणका लागि, मल्टीमीडियाहरू समावेश गर्ने तपाईंका उत्पादनहरूमा समीक्षाहरू फेला पार्नुहोस्. उत्पाद तस्विरहरू वा अनबक्सिङ भिडियोहरूको साथ सबै समीक्षाहरू तपाईंको ब्रान्ड जागरूकता सुधारको लागि फायदेमंद हुन सक्छ. तपाईं आफ्ना ग्राहकहरूलाई छुट वा उपहारको लागि यस्तो रचनात्मक समीक्षा गर्न प्रोत्साहन दिन सक्नुहुन्छ. यदि तपाईंले स्थानीय उत्पादनमा आफ्नो उत्पादनको आनन्द लिनुभएको छ भने, त्यसपछि उनीहरूलाई तपाईंको Amazon पृष्ठमा समीक्षा छोड्न सोध्नुहोस्.
यसबाहेक, तपाइँले सबमिट गरिएका समीक्षाहरूको भोल्युम बढाउन फरक प्रतिक्रिया कार्यक्रमहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ र सकारात्मक व्यक्तिहरूलाई सकारात्मक र नकारात्मक प्रतिक्रिया दिनुहोस्।.
भन्दा पहिले मैले उल्लेख गरेको थियो, सकारात्मक प्रतिक्रियाले अमेजनमा तपाईंको व्यापार पृष्ठको पङ्क्तिलाई महत्त्वपूर्ण असर पार्न सक्छ।. त्यसैले नयाँ गुणस्तर प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया उत्पन्न गर्न, तपाइँ आफ्नो ग्राहकहरूको छुट कोडहरू पूर्वावलोकनको लागि प्रस्ताव गर्न सक्नुहुन्छ. फलस्वरूप, यसले तपाईको अमेजन खोज रैंकिंगलाई तुरुन्तै सुधार गर्न सक्छ र तपाईंको बिक्री बढाउन मद्दत गर्दछ.
यसबाहेक, नियमित आधारमा दिगो सिर्जना गर्न राम्रो उपाय हो. यसले तपाईंको ब्रान्डको सकारात्मक छवि सिर्जना गर्न र भलाई भरी सिर्जना गर्न मद्दत गर्नेछ. यदि प्रयोगकर्ताहरूले तपाईंको उत्पादनको गुणस्तर पूरा गर्न बाँकी छन् भने, तिनीहरू अर्को पटक तपाईँलाई अर्को पटक सम्भावित हुने सम्भावना हुनेछ Source .